Wargeyska "Offshore" oo sheegay in Soomaaliya ka been sheegtay ujeedada shirkii xaraashka ee London (Xigasho) - Muqdisho Online
Home Wararka Wargeyska “Offshore” oo sheegay in Soomaaliya ka been sheegtay ujeedada shirkii xaraashka...
Wargeyska “Offshore” oo sheegay in Soomaaliya ka been sheegtay ujeedada shirkii xaraashka ee London (Xigasho)
Wargeyska caanka ahee lagu magaacao Offshore kana hadla arimaha qodista shidaalka ee badda iyo tiknaloojiyadda casriga ah ayaa nuqulkiisii soo baxay shalay ku sheegay in dowlada Soomaaliya ay ka been sheegtay in ay xaraasheyso Shidaalka Soomaaliya.
Wargeyska oo xaruntiisa weyn ay ku taalo magaalada Plymouth ee Gobolka Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaa ku shaaciyay nuqulkaas in Dowlada Soomaaliya ay shaacisay in ay beecinayso 15 ceel oo laga qodayo shidaal kuwaas oo dhamaantood warqada fasaxa lagu siin doono si ay u qodaan shidaalka Soomaaliya.
Wargeyskaan oo ah mid caan ku ah soo tabinta xogaha qodista shidaalka ayna ku tixan yihiin dadka ka ganacsada qodista shidaalka ayaa banaanka soo dhigay beenta Dowlada Soomaaliya oo in mudo ah ku doodaysay in ayan jirin wax xaraash ah oo lagu sameeynayo shidaalka Soomaaliya.
Wariyaha VOA Harun Macruuf ayaa soo bartiisa Twitter ku muujiyay in ay u muuqato in Dowlada Soomaaliya bixinayso fasaxii shdiaalka oo beecintii shidaalka ay socoto.
(This is inline with ⁦today’s @i_dossier⁩ report)
Somalia opens offshore licensing round – Offshore https://t.co/6zw9oS2wXI
— Harun Maruf (@HarunMaruf) February 13, 2019
RW Xassan Cali Kheyre ayaa ah shaqsi ku dheereeya beenta iyo indha sarcaadka isaga oo isticmaalo moowjado been abuur ah. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in wasiirka Batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed uu u sheegay in ay in mudo soo wadeen qabanqaabada beecinta Shidaalka Soomaaliya. Su’uusha u baahan in la isweydiiyo ayaa ah maxaa keenay in Xassan Cali Kheyre ku sheego shirkii London mid lagu soo bandhigayo shidaalka oo ah kali ah taas oo xaqiiq ka fog. Shirkaas ayaa ahaa mid qiiq isku qaris ah si ra’yiga shacabka Soomaaliyeed loo qaldo.
Dhanka kale nin lagu sheegay in uu yahay lataliyaha Wasaaradda Bartoolka Soomaaliya oo lagu magacaabo Dr Pedro van Meursayaa u sheegay wargeyska in heshiiska hanaan-qaybsiga Qeyraadka dalka ay Dowlada Soomaaliya soo saartay ama ay doonayso in ay istcimaasho uu ka laciifsan yahay ama uu ka jilicsan tahay marka la fiirsho heshiis wadamada kale ay la galayaan heshii wax-qaybsi shirkadaha gaarka loo leeyahay. Waxa uu tusaale u soo qaatay wadamada kale ee Afrika ku yaal sida Kenya, Tanzania, Mozambique oo sameeystay ama taabagaliyay heshiis culus oo wax-wada qaybsi ah.
Hadaba Shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay uga hortagaan xaraashka aan loo meeldayin ee lagu sameeynayo shidaalka Soomaaliya. Waxaa muuqato in shirkado badan hoos lagala heshiiyay kuwaas oo xirii dhaqaale la leh Farmaajo iyo Kheyre.
Previous articleMasuuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo ka degay Garoonka Aadan Cadde (Ogoow sababta!)
Next articleDowlada Somaliland oo ku tilmaamtay siyaasiyiintii tagtay Muqdisho shaqo doon (Video)